hoy izy ireo … | NewsMada
hoy izy ireo …
-Mike Mutebi (Mpanazatran’ny KCCA) : Tsara ny lalao amin’ny ankapobeny. Nisy fanafihana maromaro nataonay nefa resy izahay. Nanantombo ny Cnaps tamin’ny lalao. Lasa nanaraka ny fomba filalaon’izy ireo ny mpilalaonay ka tsy nety intsony. Hohatsaraina izany ary hanafika kokoa izahay amin’ny lalao miverina, raha somary niaro tena teto. Manana ny mpanohana sy ny mpjiery anay koa izahay rehefa any.
-Typeh (Mpanazatran’ny Cnaps Sport) : Tsy tao amin’ny heriny sy ny tanjany i Niasexe ary hita ny tsy fetezan’ny lalaony ka nosoloina an’i Foroche. Tokony mbola nampiditra baolina fahatelo isika saingy tsy nahomby izany. Hiezaka izahay ny hampiditra baolina betsaka. Nahafaty izy ireo teto ka tokony hahatafiditra koa isika amin’ny lalao miverina.
-Ando (Kapitenin’ny Cnaps Sport) : Manana haavo tekinika ambony ry zareo Ogandey. Hiezaka izahay amin’ny lalao miverina fa efa hita ny lesoka tamin’iny lalao mandroso iny. Tsy ho moramora koa anefa izany satria nahatafiditra baolina izy ireo teto amintsika. Manome toky izahay fa hanao ny tsaratsara kokoa.